ओली लाई गगन थापाको व्यङ्ग्य: बालुवाटारमा बनिसकेको भवनको कोठा उद्घाटन गर्नुस। (भिडियो सहित):: Mero Desh
ओली लाई गगन थापाको व्यङ्ग्य: बालुवाटारमा बनिसकेको भवनको कोठा उद्घाटन गर्नुस। (भिडियो सहित)
Published on: २६ चैत्र २०७७, बिहीबार १०:०३
“नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्र भवन को शि’लन्यास र बनिसकेका कोठाको उ’द्घाटन गर्न सुझा एका छन्। विकासको काम भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले प्र’श्न न’गर्ने ठाउँमा हु’क्के, चिलिमे, बैठके र चौतारे राखेर गफ ठोक्ने गरेको उनले बताए।
“प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री पुल सञ्चा लनमा आएको २ वर्षमा उ’द्घाटन गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। उनले निर्माण सुरु भएको २३ वर्षमा बनेको मेलम्ची आयोजनाको उद्घा’टनभन्दा सरकारले आयोजना ढिला भयो भनेर मा’फी माग्नु पर्ने बताए।
“उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीले ५७ दिनमा पानी आउँछ भनेको तर साढे २ वर्ष लागेको उदाहरण दिए। मे’लम्ची आउन साढे २ वर्ष लाग्यो। डेढ अ’र्ब खर्च लाग्यो। नौ महिना कामको सिन्को भाँचिएन। अहिले यत्रो फुर्ति’, थापाले भने, ‘७ देखि ८ वर्षको आयोजनामा २३ वर्ष लायो। अर्ब बढीको भार लाग्दा मा’फ माग्नु पर्ने हैन।
“श्रेय लिने होडबाजी। यो आयोजनाबाट सिक्यौं भन्नु पर्नेमा कहिले धारा खोलेर कहिले बाल्टिन थापेर चम त्कार भयो भनेर तमासा गरेको छ। ‘उनले माथिल्लो तामाकोसीको अवस्था पनि मेलम्चीको जस्तै हुने बताए।
“२०७१ मा चैतमा तामाकोसीको ८० प्रतिशत काम सकिएको र भूकम्प र ना’काबन्दीको असरका कारण ढिलामा ७५ सालमा सकिनु पर्नेमा अहिले पनि नस किएकोमा पनि उनले प्रश्न उठाए। अब ठ्या’क्कै मेलम्ची को जस्तो तमासा तामाकोसीमा देखिनेछ’, थापाले भने, ‘त्यसपछि ग’ज्जबै भयो।
“चत्मकारै भयो। बिजुली बालिदिनुभयो। पानी झारिदिनु भयो भन्ने कविताहरू अब हामीले सुन्न पाउने”छौंउनले फास्ट ट्रयाक, पश्चिम सेती आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे कुराकानी गर्नु पर्नेमा जोड दिए। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा वर्षौंदेखि समस्या रहेको बताए।
“हाम्रा आयोजना थला पर्नुमा संस्थागत, आभार भूत समस्या छ। मोडालिटीमा, स्रोत, समन्वय, शै’लीमा, का’नुनमा समस्या छ’, थापाले भने, ‘नेतृत्वबाट हाम्रो अपेक्षा त यसलाई बदल्ने हो। मिथ्याङ्क ल्याएर ग’फ चु’टेको छ। बसेर यो भयो, त्यो भयो भनेको छ। चालु भएको पुल २ वर्षपछि उ’द्घाटन गरेको छ।
“ठेक्का लागेको छैन, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन को शिलान्यास गरेको छ। सबस्टेशन चार्ज भए को कहिले? अस्ति गएर थिचेको छ बटन। के को तमासा हो?’उनले प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक बनाउने आयोजनाको उद्घा’टनमा पनि प्रश्न गरे।
“अस्ति भर्खर १६५ सडक ट्याक्क बटम थिचेर उद्घाटन गरेको छ। पैसा ३ अर्ब छ, लाग्छ ५७ अर्ब। डिजाइन छैन। पैसा छैन। डिजाइन पनि नचाहिने, पैसा पनि नचाहिने। वर्षको जम्मा ८ देखि ९ सय किलोमिटर बनाउने सडक विभागले २२/२३ सय सडक थप्न संस्थागत क्षमताको हिसाब गर्न नपर्ने’, थापाले आ’क्रोशित हुँदै प्रश्न गरे, ‘एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १० वटा ठोक्दिउँ। १६ सय ५० वटा।
“प्रधानमन्त्रीजस्तो बहादुर भएका बेला ठोक्दिए भइहा ल्योउनले सडक पिच भएको भनेर प्रधान मन्त्रीले दिएको तथ्याङ्कको क्याल्कुलेटर ल्याएर हिसाब गर्नुपर्ने बताए।
“हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा समस्या छ। अहिले को सरकार मात्र गरेन भन्दिनँ। हाम्रो आधारभूत समस्यामा छ। हाम्रो स्रोतमा छ। काम लगाउने क्षमतामा छ। तमाम समस्या समाधान गरेमात्र अवस्था बदलिन्छ’, थापाले भने, ‘यही संसदले कानुन बनाउनु छ। नेताले आयोजना छान्ने, कर्म चारीले काम गर्ने अनि निर्माण व्यवसायीले गर्दिन्छ भन्ने तरिका बदल्नुपर्नेछ।
“प्रधानमन्त्रीजयू, तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गर्न म संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु। होइन भने सभा-सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके र चौतारे राखेर माथिबाट ठोक्ने अनि माननीय सांसदले बाल कवि -ता सुनाउने। म हामी तपाईंसँग बहस गर्न तयार छौं। ल आउनुस्।
“उनले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालगायत र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बहसका लागि निम्त्याए सुरू भइसकेका पुल उ’द्घाटन सक्किएपछि बालुवाटार परिसरमा थुप्रै जग्गा खाली छ। त्यहाँभित्र प्रत्यके दिन एउटा भवनको शिलान्यास गर्नु होला’, थापाले व्यङ्ग कसे, ‘त्यहाँ बनेको कोठाको उ’द्घाटन गर्नुहोला।’सेतोपाटी!!